अपि पावर कम्पनीको हकप्रद कात्तिक १४ गतेदेखि विक्रीमा
असोज २३, काठमाडौं । अपि पावर कम्पनीले आगामी कात्तिक १४ गतेदेखि हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने भएको छ ।
कम्पनीले रू.१०० अंकित मूल्यको ५६ लाख ७० हजार कित्ता हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनीले एक शेयर बराबर नयाँ शून्य दशमलव ४७ कित्ता शेयर अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको शुक्रवार प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।
यो हकप्रदका लागि अपि पावरले यसअघि नै बुक क्लोज गरिसकेको छ ।उक्त हकप्रदमा मंसिर ४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने छ । विसं २०७६ साल फागुन ३० गतेसम्म कायम शयरधनीले उक्त हकप्रदमा आवेदन दिन पाउने छन् । हकप्रदको विक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल रहेको छ ।
शेयरधनीले उक्त हकप्रद शेयरका लागि सिद्धार्थ क्यापिटल, अपि पावर कम्पनीको कार्यालय थापाथली, काठमाडौंबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै सिद्धार्थ बैंकको शाखा कार्यालयहरु विराटनगर, वीरगञ्ज, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, धनगढी र सुर्खेतबाट आवेदन दिन सकिनेछ । त्यसैगरी ग्लोबल आइएमई बैंकको दाचुर्लाको गोकुलेश्वर, नौगडा, खलंगा र बैतडीको शाखाबाट आवेदन दिन सकिनेछ ।
त्यस्तै धितोपत्र बोर्डबाट सी–आस्वा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर सफ्टवेयर मार्फत आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको हालको अधिकृतपूँजी रू. ५०० करोड, जारीपूँजी रू.४०० करोड र चुक्तापूँजी रू.११९ दशमलव शून्य ७ करोड रहेको छ ।
आव २०७६/ ०७७ को व्यवस्थापनबाट प्रमाणित अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुरुप कम्पनीको जम्मा नेटवर्थ १३६ करोड रहेको, जगेडा कोष तथा संचित नाफामा रू. १७ करोड रहेको र प्रतिशेयर आम्दानी रू. ८ दशमलव शून्य ४ रहेको छ ।
कम्पनीले आफ्नो लगानी तथा बैक ऋणबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लामा वग्ने नौगड गाढ नदीको पानी उपयोग गरी प्रथम आयोजनाको रुपमा ८ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको नौगड गाढ जलबिद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विसं २०७२ भाद्र २ गतदेखि राष्ट्रिय ग्रिडमा विद्युत् प्रवाह गरी व्यापारिक उत्पादन गरिरहेको छ । सुदूररपश्चिम प्रदेशमा निजी लगानीबाट १७ महीना भित्र निर्माण गरी संचालन भएको यो नै पहिलो जलविद्युत् आयोजना भएको कम्पनले बताएको छ ।
कम्पनीले ४० मेगावाट क्षमताको तेश्रो जलविद्युत् आयोजना अन्तर्गत माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि शेयरधनीहरुबाट शेयर पूँजी जुटाउन हकप्रद शेयर जारी गरेको हो ।
उक्त आयोजना निर्माणका लागि जम्मा रु. ७४० करोड लगानी लाग्ने अनुमान कम्पनीले गरेको छ । कम्पनीले कुल लागत मध्ये ३० प्रतिशतले हुने रकम रु. २२२ करोड आफ्ना शेयरधनीहरुलाई हकप्रद शेयर जारी गरी दुई चरणमा रकम संकलन गरी लगानी गर्ने योजना बनाएको छ ।
बाँकी ७० प्रतिशतले हुने रकम रू. ५१८ करोड हिमालयन बैंक लिमिटेडको अगुवाईमा क्रमशः कर्मचारी संचय कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड सहभागी गरी आयोजनाको सह–वित्तीयकरण बनाई बैंक ऋण प्रवाह गर्नेगरी वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता गत असोज ११ गते सम्पन्न गरेको छ ।